Kalkaaliyaasha gaadidka degdegaa oo cabanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kalkaaliyaasha gaadidka degdegaa oo cabanaya
La daabacay torsdag 16 augusti 2012 kl 15.01
Ambulans ka soo dhaqaaday Goloben. Foto: Maja Suslin/Scanpix.
Shaqaalaha caafimaadka ee wada gaadidka degdegaa ee ambulanska ayaa ka soo yeeraysaa cabsho la xiriirta xaaldooda shaqo. Xiliga ay shaqeeyaan oo dheer iyo sharuudaha ka imaanaya bukanada, shaqobixiyaasha iyo SOS Larm oo adag, ayaa keenay in ururka kalkaaliyaasha anbulansyada ka gilgilshaan. Bukaanka amnigooda qatar ayuu ku suganyahay ayuu lee yahay Janne Kauto oo ah gudoomiyaha ururka kalkaaliyaasha anbulanyada.
- Landstingyada wadanka oo idil siyaabo kala gedisan ayey u maamulaan daryeelka caafimaadka ee anbulansyada. Waxaa ka jira kala gadisanaan. Ma jiro xaduud ay dowladda u samaysay oo oranaya sidaan ayaa shaqada loo qabanayaa, ama xaduud sheegaysa sida aan wax u daweynayno, wax xaduud ah ma jiro oo ku saabsan howlaha anbulanska, mida kaliya ee ay Socialstyrelsen naga dalbatay ayaa ah in baabuurto ahaadaan yelow oo leh deliigtin cagaaran, oo ay shaqaaluha tacliintooda ugu yaraan ahaato kalkaalinimo. Inkastoo xataa aysan ahayn taas sharuudah dhamaan landstingyada. Kauto ayaa aminsan in waxyaabahaas ay sababayso in ay adkaato helida daryeel caafimaad oo lagu kalsoonyahay.
Hadaba waxaa laysweydiin karaa amniga bukaanka sidee buu qatar u gali karaan Janne Kauto iyo mar kale.
- Culayska haysta ambulanska aad ayuu u badanyahay. Taas oo ka micno ahaan karta hadii ay qof soo wajahdo wadno xanuun, uu heli anbulans caawisa dhaqso waa haduu nasiib leeyahay, lakiin hadii uu nasiib xuntahay waxaa laga yaabaa in anbulans lagaa soo diro magaalada Nynäshamn. Taas oo ah magaalo ku taala koonfurta fog ee Stockholm. Ayada oo ay xataa dhici karto in wadaha ambulanska uu shaqeenayey wax ka badan 17 saacadood oo xiriir ah.
Shaqaalaha oo yar ayaa sabab u ah in kalkaaliyasha anbulanska lagu qasbo in ay shaqeeyaan waqti dheraad ah.
- 30-daqiiqo kabacdii ayaan galayaa shaqada, mana hubo in aan biri subaxii gurigayga imaan doono oo aan heli doono fursad aan ku jiifto. Waxaa surtagal ah in laygu qasbo in aan sii shaqeeyo madaama aysan jirin qof i badala.
Dhibkana waxaa sabab u ah ayuuyeri ku wareegjinta lagu wareejiyey shirkadaha qaaska loo leeyahay maareynta anbulansyada. Waagii hore markii howsha anbulansyada ay hoos imaan jirtay landstingyada 10 qof ayaa ka howl-gali jirtay garaash kasta oo ay ka baxaan anbulaansyada, xiligaasna amniga bukaanku waa sugnaa, balse hada oo anbulansyada oo ay maareeyan shirkadaha privat.ka ah, garaashkii waxaa ka howl-gala tadobo shaqaalo ah ayuu yeri Janne Kauto.
- Masuuliyada wax ka qabashada arintaan waxa ay saarantahay shaqaalaha hay'adaha dowladda, siyaasiinta iyo dowladda ayuu sidoo kale aaminsanyahay.
Lakiin Lars Joakim Lundqvist oo xisbiga Moderatka u fadhiya landstinga Stockholm una qaabilsan arimaha caafimaadka degdegaa ayaan asagu ujeedin cabashada ka soo yeeraysa wadayaasha anbulansyada isla markaan kalsooni weyn buu ku qaba shirkadaha privat:ka ah ee Stockholm u maareeya anbulsanyada, eedeynta iyo dhaleecayntana ku tilmaamey ka badbadin ah.
- Kalsooni weyn baan ku qabnaa kuwo ka shaqeeya waxda anbulansyada. Eedeymaha la soo jeedinayo ma ahan kuwo la xaaqiijin karin, ma aaminsani in ay yahiin kuwo xiiso leh, ayuu yeri.
Balse Dag larsson oo xisbiga mocaaradka soshiyaaldemokratiga u fadhiya landstinga Stockholm ayaa aaminsan in dhibka ay sheeganayaan wadayaasha anbulansyada yahiin wax run ah.
- Waan la qabaa in ay jirt dhibaatada uu Janne Kauto ka sheekeeyey, ainga xataan waan booqday xarumaha anbulansyada, waxaana kula sheekaystay wadayaasha anbulanyada hosbitaalka Hudinge waxayna ii sheegeen xaalad aan la qaadan karin. Waxay ii sheegen in shaqeeyaan 14 saacadood oo xiriir ah, waxay ii sheegeen khisooyin ah in anbulanska aysan sadex maamalmood ah tagin garaasha lagu nadiifiyo maadaama ay intaas shaqo ku jirto. Markaan weydiiyey Lars Joakim Lundqvist meyeysan ahayn in arintaan aan wax ka qabono jawaabtiisa waxay noqotay mana qusayso arintaan, waxay qusaysaa shirkada privat:ka ah ee maareynta lagu wareejiyey, ayagaa leh masuuliyada shaqaalahooda, ayuu yeri.
Dag Larsson waxa uu aaminsayahay in la gaarey xiligii xaqiida oo ay shaqaalahu ku socdaan jilbaha, hadii aan arinta wax laga qabana ay qatar galayso amniga bukaanka. Xaalada lagu jiraan aan loo dulqaadan karin.